Ikhaya - Mytika Speak
Apho uLogic neMvakalelo zimanyene
Amatangatye amawele kunye nothando lukaThixo
UThixo kunye noMoya
I-Ego kunye nePhysical
Abalinganiswa kunye neempawu
Ibhalansi kunye neGrey
Umhlaba kunye noMbane oMbane
Iimvakalelo, amaqhosha kunye nokuBonakaliswa
IKarma, ukuphindukuzalwa kunye noLwandiso
Iimbono, iziphazamiso kunye neMpawu
Zeziphi ezinye iindlela zokuzivocavoca zamawele amadangatye asandula ukudibana?
Ngaba amawele omlilo angaba ngesini esifanayo?
Yintoni enokuphinda ihlangane ngamawele amadangatye?
Ndazi njani ukuba amawele omlilo akhona ngokwenene?
Zininzi iindlela zokuzilolonga ezenziwa ngamadangatye omabini ukuze zilungelelane kwaye zikhule kunye. Iinkcukacha zale mithambo zinokunikwa ...
Ndazi njani ukuba ndiyayazi nyani into?
Ngaba ikhona indlela elula yokufumanisa eyona nto ndiyibhalayo?
Ndazi njani ukuba ndidibene ne-True Self okanye i-Ego yam?
Ndiba njani u-empath?
Ndiyeka njani ukuba nefuse emfutshane?
Ndiyeka njani ukuba ngumkhohlisi?
Ngaba ukhona umntu ofikelela kwinqanaba lokoneliseka bubomi?
Ngaba amawele omlilo okwangoku ahlangana ngakumbi?
Ndingakulungiselela njani ukudibana newele lam?
Ukwazi amandla kungagqitha njani?
Amandla okuzithemba anokuba krwada njani?
Februwari 5, 2021
Amandla aqinisekileyo anokuba njani ngokugqithileyo?
Amandla akhutheleyo anokugqithisa njani?
Amandla anomdla angaba njani agqithisileyo?
Amandla okhuthazo anokuba mbi njani?
Ego kunye nePhysical
Yintoni ilifa lomntu kubazali bakhe?
Cela ingcebiso kuMytika
Yiba ngowokuqala ukwazi xa sithumela iimpendulo ezintsha kwimibuzo yakho yokomoya.
Mytika Speak sisixhobo kwabo bafumana ukuvuswa ngokomoya, ukuhlangana kwakhona kwamadangatye, ukufunda ukuzibonakalisa, ukufumanisa ubuqu babo bokwenyani, kunye nezinye izihloko ezininzi ngokunika iimpendulo kwimibuzo yokomoya.
Random For Wena
Buyintoni ubudlelwane phakathi kwendalo iphela noMhlaba / iNyanga / iLanga?
Kutheni abantu bengandamkeli nje?
Kutheni le nto umphefumlo omnye ukhethe ukwahlula kubini?
ukuqonda ukuqonda uthando lukaThixo Ego kakhulu UThixo haiku phe fumlelwe izifundo ku boniswa micropoetry ukukhula komntu Umbongo imbongo umfutshane ngokomoya ngokomoya izifundo zokomoya Ngokwenene Amadangatye eTwin
Amalungelo okushicilela © 2022 Mytika Speak. Onke Amalungelo Agciniwe. umthetho wabucala kwaye Imigaqo yokuSebenzisa